Home News Maxeey qaban doonaan ciidamada cusub ee loo diyaarinaayo gobolka Banaadir!
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la diyaarinaayo Ciidamo Boolis ah kuwaasi oo sugaya amniga Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Raisulwaasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeeray xarumaha ay ciidamadda tababarka ku qaadanayana sida Iskuul Boliisiyo Degmadda Xamar Jajab,halkaasi oo ciidamo badan oo booliska kamid noqonaya maalmahaan uu tababar kaga socday.
Kheyre oo la hadlay Ciidamada Tababarka qaadanaya ayaa ku dhiirigaliyay sida ay diyaar-ka ugu yihiin difaaca dalkooda,wuxuuna sheegay in dhawaan ay lagu wareejin doono amaanka Magaaladda Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa in ay sugto amaanka Magaalada Muqdisho, oo laba jimco ka hor ay qaraxyo ka dhaceyn.
Previous articleMahad Cabdlla Cawad oo kulan xasaasi ah la qaatay wafdi caalami ah oo ka socday Dalka Sudan
Next articleDFS kaalin intee la eg ayeey ku laheed in Eritrea cunaqabateeynta hubka laga qaado maxeeysa ka dhaxashay!!
Xassan Shiikh oo la Kulmay Xildhibaanadda Iyo Wasiirada Ku Heeybta ah,Maxaa...
Itoobiya oo gacanta ku dhigtay Gaari lagala baxsaday Soomaaliland